प्रसोधन र ढुवानी -
प्रोसेसिंग टाइम्स (अन्तर्राष्ट्रिय र यूएस)
प्रसोधन समय 5-6 व्यापारिक दिन हो। यो केवल एक अनुमान अनुमानित औसत प्रोसेसिंग समय हो र 5-6 दिन भन्दा लामो वा लामो हुन सक्छ। सप्ताहांत र छुटहरू व्यापार दिनहरू छैनन्।
न्युबियन विग रेखा, बन्दोबस्त र बल्क बाल 5-12 व्यापारिक दिनहरू बीचमा, प्रक्रियाको लागि अधिक समय आवश्यक पर्दछ जब विगहरू सिर्जना गर्न समय र बन्द गर्दछ। हामीसँग स्टकमा बल्क (ढीला ब्रेडिङ / कर्सेट) बाल छैन। तपाइको धैर्यता को लागी धन्यवाद!
छुट्टीको मौसममा र बिक्री / प्रचार मितिवहाँ सामान्यतया एक छ 2-3 व्यापारिक दिन ढिलो अर्डरको ठूलो रकमको कारण प्रशोधनमा तर यसले ढिलाइमा एक हप्तासम्म विस्तार गर्न सक्छ.
ट्रयाकिङ नम्बरहरू अनुमति प्रक्रिया समय पछि सबै अर्डरहरूमा पोस्ट गरिनेछ। हामी तपाईंलाई तपाईंको ट्र्याकिङ नम्बर पठाउनेछौं पेपैलबाट इमेल मार्फत.
तपाईंको आदेश प्रक्रिया समाप्त भएको भएपछि हामी प्राथमिकता 2-3 दिन मेल प्रयोग गरेर संयुक्त राज्य अमेरिका पोस्टल सेवा (www.USPS.com) को माध्यमबाट सबै अर्डरहरू पठाउँदछौं।
मेरो प्राकृतिक कपाल एक्सटेन्सन कुनै पनि लागि जिम्मेवार छैन हराएको वा चोरी प्याकेजहरू एकपटक ट्रयाकलाई डेलिभर गरिएको पुष्टि गरिएको छ. हामी मेरो प्राकृतिक हेराक एक्सटेन्सन नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेका असामान्य परिस्थितिहरूको कारण हराएका वा चोरी भएका कुनै पनि प्याकेजहरूको लागि खरीददारों को प्रतिपूर्ति गर्दैनौं। कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सुरक्षित स्थानमा शिपिंग गर्दै हुनुहुन्छ। सबै अर्डर आउनेछन् $ 50 को बीमा को लायक यदि तपाईं पूरा रकम सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि कृपया हामीलाई ईमेल को माध्यम ले खरीद पछि तपाईंको अर्डर नम्बर संग सम्पर्क गर्नुहोस्।
$ 250 वा धेरैको आदेशहरू निःशुल्क शिपिंगको लागि योग्य हुनेछ! शिपिंगको लागि तिर्न छनौट गर्ने यो छिटो पुग्ने छैन।
कृपया तपाईलाई दिनेछु मितिमा अर्डर राख्नुहोस् पर्याप्त समय तपाईंको अर्डर प्राप्त गर्न पहिले तपाईंको कपालको नियुक्ति। प्रशोधन समय छिटो वा व्यक्त गर्न सकिँदैन। तथापि शिपिंग समय व्यक्त गर्न सकिन्छ।
अन्तरराष्ट्रीय हस्तान्तरण (संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा अन्य सबै देशहरू)
आदेशहरू मार्फत पठाइनेछ यूएसपीएस (www.USPS.com) अनुमति प्रकृया समय पछि।
ढुवानी अन्तर्राष्ट्रिय आदेशहरूको लागि 25 $ - $ 65 बाट दायरा हुन सक्छ।
कुनै पनि प्याकेजहरू जुन दावी गरिएको छ र हामीलाई फर्काउँछ केवल व्यापारको लागि फिर्ती प्राप्त हुनेछ। ढुवानी फीस फिर्ता क्रेडिट गरिनेछैन।
तपाईंको देशको आधारमा तपाईंको प्याकेज एउटा विषय हुन सक्छ आगमनमा सीमा शुल्क वा शुल्क शुल्क। यो अतिरिक्त चार्ज MNHE शुल्क या संयुक्त राज्य शुल्क छैन। कृपया तपाईंको स्थानीय सीमा शुल्क एजेन्सीसँग जाँच गर्नुहोस् कि यो शुल्क तपाईंलाई लागू हुनेछ भने हेर्न। यदि त्यसो त तपाईले तपाईंको शुल्क प्राप्त गर्न त्यो शुल्क तिर्न आवश्यक हुनेछ।
मेरो प्राकृतिक कपाल एक्सटेन्सन कुनै पनि लागि जिम्मेवार छैन हराएको वा चोरी प्याकेजहरू एकपटक ट्रयाकलाई डेलिभर गरिएको पुष्टि गरिएको छ. हामी मेरो प्राकृतिक हेराक एक्सटेन्सन नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेका असामान्य परिस्थितिहरूको कारण हराएका वा चोरी भएका कुनै पनि प्याकेजहरूको लागि खरीददारों को प्रतिपूर्ति गर्दैनौं। कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सुरक्षित स्थानमा शिपिंग गर्दै हुनुहुन्छ। सबै अर्डर आउनेछन् $ 100 को बीमा को लायक यदि तपाईं पूरा रकम सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि कृपया हामीलाई ईमेल को माध्यम ले खरीद पछि तपाईंको अर्डर नम्बर संग सम्पर्क गर्नुहोस्।
जुन 20, 20175मा: 03 बजे
के यो guranteed 5-6 दिन व्यापारको प्रतीक्षा छ, यदि यो लामो समय लाग्छ, म फिर्ता रकम प्राप्त गर्न सक्छु।
जुन 20, 2017 10 मा: 23 बजे
यो एक garuntee होइन, यो एक अनुमान हो। यो औसत प्रोसेसिंग समय भन्दा लामो वा छोटो हुन सक्छ। यद्यपि हामी त्यस समय फ्रेम भित्र बाहिर सबै अर्डर प्राप्त गर्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो गर्छौं। 🙂
मई 8, 20185मा: 53 बजे
नमूना कपाल प्राप्त गर्न लामो समयसम्म लिन्छ?
साथै, तपाईंसँग ब्रेकिंगको लागि बल्क कपाल छ? म यसलाई तपाईंको साइटमा अर्डरको लागि देख्न सक्छु, सायद मैले यसलाई गलत तरिकाले पढेको छु तर मैले सोचेँ कि यो उपलब्ध छैन ... plz सल्लाह
मई 8, 2018 10 मा: 35 बजे
नमस्ते। 1 -2व्यापारिक दिनको बारेमा नमूना प्याकेज जहाजहरू छैनन्।
जुलाई 16, 2018 11 मा: 10 बजे
त्यसैले क्रसट र ब्रेइडिङको लागि प्रयोग हुने बल्क कपालको लागि अनुमान र शिपिंग के अनुमान गरिन्छ?
डिसेम्बर 27, 20185मा: 55 बजे
यसले हाम्रो वर्तमान अर्डर कन्टमा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया 1-2 हप्तामा तपाईले तपाइँको ढोकामा डेलिभरी गर्ने क्रममा यो हप्ता।